Ny akanjo eo amin'ny gorodona misy fery amin'ny hip-kapoka dia nahazo laza malaza tamin'ny taona faramparany. Anisan'io fomba io ny Anglisy Jolie. Ny akanjo toy izany dia tsy isalasalana fa hanome ny maha-vehivavy azy, ary koa ny fahatokisana ny tsy fandeferana.
Iza no hanao akanjo lava amin'ny fanala?
Ity akanjo ity dia mijery ny tombony indrindra amin'ny tompon'ireo tongotra mamony. Raha toa ka tsy manana mari-pamantarana maodely ianao dia tsy antony tokony handavana izany akanjo izany. Ny fisamborana dia afaka mipetraka amin'ny toerana samihafa ary manana endrika hafa. Miankina amin'izany ny:
Ny akanjo miaraka amin'ny fehikibo amin'ny hip dia ampiasaina ho akanjo hariva, ho an'ny dia mankany amin'ny fampisehoana tantara an-tsehatra, ho an'ny daty amam-potoana.
Amin'ny inona ny manao akanjo amin'ny gorodona miaraka amin'ny tapa-kazo amin'ny hip?
Miangavy ny hitandrina ny fepetra takiana amin'ny fisafidianana kiraro sy ny akanjo ho an'ny akanjo lava miaraka amin'ny fehin-koditra, toy izao manaraka izao izy ireo:
Ilaina ny manaisotra ny fametrahana akanjo toy izany amin'ny kiraro amin'ny haingam-pandeha. Ohatra, ny trano biletà dia tsy hitovitovy aminy. Ny safidy idealy dia boatin-kiraro na sandam-boninahitra tena tsara eo amin'ny savily ambony .
Amin'ny fahavaratra dia tsy afaka mitafy kiraro amin'ny akanjo ianao. Izany dia hampivoatra ny tananao mahafinaritra. Amin'ny vanim-potoana mafana, ny hatsikana dia ampitomboina amin'ny lokony feno loko.
Miaraka amin'ny akanjo toy izany dia hijery môtô gitara lehibe. Ny varimbazaha amin'ny kitapo volomena dia tsy azo atao.
Satria ny akanjo dia mibaribary eo amin'ny tenany, ny akanjo goavana dia tsy tokony.
Boots-stockings - amin'ny inona no tokony hitafy sy ny fomba hamoronana sary hoso-doko?
Ny akanjo homemade - 42 sary ny fomba tsara indrindra ho an'ny tsiro rehetra
Skirt amin'ny basque
Polisy ho an'ny vehivavy bevohoka
Ny ririnina fanao amin'ny ririnina Failandey amin'ny sintepone
Kitapo "Napoleon" miaraka amin'ny fanamainana - fomba mahazatra
Misotro zava-pisotro miaraka amin'ny ginger sy ny lempona
29 fampakaram-bady mahomby indrindra amin'ny tantaran'ny fampakaram-bady
Inona no asehon'ny hemoglobine glycated?
Fonon'ny plastika ao amin'ny efitrano fandriana
Toeram-pamokarana herinaratra roa
Ny andron'ny anjelin'i Natalia
Shannen Doherty, Celine Dion ary kintana hafa ao amin'ny Stand Up to Cancer telethon
Protein Soy - Pros and Cons
Ireo mpikatroka avy amin'ny "Vampire Diaries" Paul Wesley sy Phoebe Tonkin dia nanapa-kevitra ny hanaraka ny fomba
Mpanjifa - fambolena sy fiahiana